Nokia – AsiaApps
ကင်မရာ ပြဿနာကြောင့် ထွက်ရှိလာဖို့ ကြန့်ကြာနေတဲ့ Nokia9PureView
December 11, 2018 December 11, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on ကင်မရာ ပြဿနာကြောင့် ထွက်ရှိလာဖို့ ကြန့်ကြာနေတဲ့ Nokia9PureView
ပြီးခဲ့တဲ့ Nokia 8.1 ရဲ့ Launch event မှာ HMD Global က သူ့ရဲ့ ထွက်ရှိလာမယ့် ဖုန်းတွေကို ချပြခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါပွဲမှာ ကုမ္ပဏီဘက်မှ Nokia ဖုန်း အရေအတွက် စုစုပေါင်း…
Nokia9Concept Render မှ Notch Display နဲ့ Penta-Lens Camera လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြသ
September 10, 2018 MoonSmartphone NewsNo Comment on Nokia9Concept Render မှ Notch Display နဲ့ Penta-Lens Camera လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြသ
Penta-Lens ကင်မရာနဲ့ Nokia9ကတော့ စမတ်ဖုန်းလောကမှာ မထင်မှတ်ထားတဲ့ တိုးတက်လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပါဝင်လာမယ်လို့ လတ်တလောမှာ သတင်းတွေ ထွက်နေတဲ့ ဖုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဖုန်းအတွက် တရားဝင်ကြေညာချက်ထွက်ဖို့က မသေချာသေးတဲ့အနေအထားမှာ အခုလို Nokia9ရဲ့…
Face Unlock Feature မကြာခင်ရရှိတော့မယ့် Nokia စမတ်ဖုန်းအချို့
June 26, 2018 June 26, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Face Unlock Feature မကြာခင်ရရှိတော့မယ့် Nokia စမတ်ဖုန်းအချို့
မကြာခင်အချိန်မှာပဲ Nokia စမတ်ဖုန်းအချို့ဟာ Face Unlock Feature ရရှိတော့မယ့်အကြောင်းကတော့ Twitter မှာ Nokia Mobile က User တစ်ဉီးကို reply ပြန်လိုက်ရာမှ ပေါက်ကြားလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Tweet အရ Face…
Nokia ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် handset (၃) ခု
May 31, 2018 May 31, 2018 MoonFeatures / Smartphone NewsNo Comment on Nokia ရဲ့ နောက်ဆုံးထွက် handset (၃) ခု
တစ်ခေတ်တစ်ခါက အရမ်းကိုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ cell phones တွေထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ Nokia ကုမ္ပဏီဟာ အခြေအနေ အချို့ကြောင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းကို Microsoft Mobile ဆီ ရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ Microsoft Mobile ကလည်း ၂၀၁၆…
HMD Global မှ အံ့သြဖို့ကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်း ပုံစံ ပြောင်းလဲချက်တွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ Nokia 8 Sirocco ကို မကြာခင်မှာ စတင်ဖြန့်ချီတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားပြီး သေသပ်တဲ့ ပုံစံကြောင့် လက်ရှိမှာ လူစိတ်ဝင်စားမှု များနေတဲ့…
January 19, 2018 January 19, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on MWC (2018) အတွက်အလန်းစားဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ HMD!
HMD ဟာ Nokia Smartphone Brand ရဲ့ ကုမ္မဏီဖြစ်ပါတယ်။ HMD ဟာ ဖေဖော်ဝါရီလမှာကျင်းပမယ့် MWC (Mobile World Congress) 2018 အတွက် အလန်းစားပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုတာကို Juho Sarvikas ဆိုသူ…
Oreo Update ထွက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Nokia6နဲ့ Nokia 7!
January 16, 2018 January 16, 2018 WilliamSmartphone NewsNo Comment on Oreo Update ထွက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ Nokia6နဲ့ Nokia 7!
Nokia6(2018) နဲ့7ကိုစစချင်းဖြန့်ချီတုန်းကတော့ Android 7.1 Nougat နဲ့ပါ။ ဒါပေမယ့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်က Nokia Weibo post တစ်ခုကြောင့် Nokia6(2018) နဲ့ Nokia7အတွက် Android Oreo 8.0…
Nokia62018 (TA-1054) ဟာလွန်ခဲ့တဲ့ ရက်အနည်းငယ်လောက်ကမှ ထွက်ရှိထားတဲ့ ဖုန်း အမျိုးအစားပဲဖြစ်ပါတယ်။ စစထွက်ချင်းတုန်းက Android 7.1 Nougat version နဲ့ပါ။ HMD ရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့်သာ Nokia62018…